Shaqaalaha caymiska qaranka oo musuqmaasuq lagu eedeeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Oklart hur många anställda på Försäkringskassan och hur många bolag som är inblandade. sawir: JESSICA GOW/TT
Shaqaalaha caymiska qaranka oo musuqmaasuq lagu eedeeyey
La daabacay fredag 26 februari 2016 kl 09.27
Shaqaale ka howl gala xafiisa caymiska qaranka ayaa lugu tuhmayaa in ay lacagta la siiyo dadka curyaaminta ah ku musuqmaasuqeen.
Laba qof oo laga shakiyay ayaa booliska laga ashkatayey, hasayeeshe xafiiskan ayaa aaminsan in ay tiradu intaas ka badantahay.
Ann-Marie Begler ayaa ah agaamisamaha guud ee xafiiska caymiiska qaranka.
-In ay shaqaalaheenu waxaan sameeyeen ayaa ah arrin aanu khatar u aragno. Islamarkaana ay lambarka dhalashada ee shakhsiyadan u gudbiyeen shirkadaha curyaamiinta caawiya si ay macaamil hor leh u helaan, middaasina oo ah arrin aan aad uga xumahay, ayey sheegtay Begler.
Arrinkan ayuu maamulka heeyadu ogaaday dhowr asbuuc ka hor markii ay shakhsi halkaas ka shaqeeya ka ay shakiyeen. Shakhsigan ayaa lagu tuhmaya in uu wadashaqeeyn la sameeyay shirkad caawisa curyaamiinta, dabeetana uu u gudbiyay xogta dhalashada dadkan si ay shirkadani macaamil u hesho.
Shaqaalahan ayaa dabeetana lacag ku heelay warbixinta uu gudbiyay.
Maanta ayaa qofkii labaad ee laga shakiyay booliska dacwad looga gudbiyay. Labada qof ayaa lugu tuhmaya in ay isku shirkad caawiyeen. Hase yeeshee Ann- Marie Begler agaasimaha guud ee xafiiska caymiiska qaranka ayaan war ka hayn in shaqaale kale ka qeeyb yihiin arrinkan.
-Xaaladan waa in aanu si degdeg ah u xallino, baadhitankii arrinkan ku saabsanaana weli wuu socda, ayey sheegtay.
Dembiga ay dadkani galeen ayaa cinwaan looga dhigay in ay si sharci darro ah u dhaceen xogta shakhsiga, in ay jabiyeen heshiskii shaqaalaha oo ah in ay mamnuuc tahay in xogta shakhsiga la gudbiyo, iyo in ay dembi ku galeen shaqadooda. Xafiiska caymiiska ayaa doonaya in ay ka hor tagaan arrinkan. Tusaale ayey mustaqbalka ku atkaanaysa shaqaalaha in ay helaan maclumaadka curyaamiinta.
-Hadii ay shaqaaluhu rabaan in ay musuqmaasuqaan, si sahlan ayey u heli karan maclumaadka shakhsiyadan, tan ayaanu doonayna in aanu ka hor tagno, ayey sheegtay Ann-Marie Begler.